Soomaaliya, 05 February 2019
Madaxweynihii hore ee Somalia Xasan Sheekh Maxamuud, iyo masuuliyiin ka tirsan Xisbiga uu hogaamiyo ee Midawga Nabadda iyo Horumarka, ayaa socdaal ku tagay magaalada Beledwayne.
Saraakiil ka tirsanaa Ciidanka Xoogga Dalka oo la dilay
Waxaa maanta degaanka Dhanaane ee gobolka Shabeellaha Hoose lagu dilay laba korneyl oo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaliya.
Mootooyinka oo laga ururinayo Muqdisho
Dowladda Soomaaliya, ayaa labadii maalmood ee la soo dhaafay guud ahaan magaalada Muqdisho ka xareysay mootooyinka labada lug leh, gaar ahaan nooca loo yaqaano Fekonta.
Deni oo cambaareeyey dilka Paul Anthony
Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa cambaareeyey dilka madaxii shirkadda P&O ee dekedda Boosaaso.
Qarax 9 qof ay ku dhinteen oo Muqdisho ka dhacay
Ugu yaraan 9 qof ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen 7 kalana ay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay wadada hormarta suuqa Muqdisho Mall ee degmada Xamar Weyne ee magaalada Muqdisho.
Madaxii P&O ee dekedda Boosaaso oo la dilay
Nin hubeysan ayaa maanta toogasho ku dilay madaxii shirkadda DP World ee dekedda magaalada Boosaaso.